बिहिबार कस्तो बित्दैछ तपाईंको दिन, कस्तो छ राशिफल ? - Everest Dainik - News from Nepal
बिहिबार कस्तो बित्दैछ तपाईंको दिन, कस्तो छ राशिफल ?
२०७६, २७ चैत्र बिहीबार
आज २७ चैत्र २०७६ बिहिबारको राशिफल ।
आज आँटेको र ताकेको कार्यहरू विस्तारै अघि बड्लान् । नयाँ कार्यको योजना बन्नेछ । रमाइलो साथ र सहयोगको योग रहेको छ ।
आज आफ्नो आत्मबल बढ्नेछ । जोश जाँगर र हिम्मत बढ्नेछ । शत्रुहरूपनि पराजित हुनेछन् , तर दिनको उत्तरार्धमा धन खर्च हुनेछ ।
आफ्नो क्षेत्रमा प्रभूत्व जमाउन सकिनेछ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने वेला छ । धर्म,कर्म तथा समाजसेवामा मन लाग्नेछ ।
याे पनि पढ्नुस आज - ३० भाद्र २०७६ सोमवारको राशिफल
आज महत्वकांक्षी योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला । राजनीतिक कार्यमा बाधा आउनेछ । मानसिक चिन्तापनि बढ्न सक्छ ।
आफन्तहररूको सहयोगले कामहरु अगाडी बढ्नेछन । दीर्घकालिक योजना कार्यान्वयन गरी दूरगामी प्रतिफल प्राप्त हुनेछ ।
धार्मिक कार्यमा रुचि बढ्नेछ । लगनशीलताले कामहरु अगाडी बढ्नेछन् । समाजसेवामा मन लाग्नेछ । पारिवारिक सद्भाव बढ्नेछ ।
याे पनि पढ्नुस आज बिहीबार, कुन राशिको भाग्य चम्केँला?
महिला वर्गबाट विषेश सहयोग मिल्नेछ । साहित्यिक क्षेत्रमा रुची बढ्नेछ । मानपरेको खनेकुरा खान पाईनेछ । प्रशांसापनि मिल्नेछ ।
आफूलाई कमजोर भएको अनुभूति हुनेछ । दाम्पत्य जीवनमा एक किसिमको निरसता आउन सक्छ । सांगीतिक क्षेत्रमा रुची बढ्नेछ ।
विशिष्ट व्यक्तिको सहयोग पाईनेछ । छोटो दुरीको लाभदायक यात्रा रहला । वैदेशिक कार्य अघि बढ्नेछ । चिताएको कामले तीव्रता लिनेछ ।
याे पनि पढ्नुस कस्तो बित्दै छ तपाइकाे आजको दिन ? हेर्नुस् यस्तो भन्छ राशिफल
आज अरुलाई प्रभावित पारेर काम बन्नेछ । बन्धु बान्धवबाट सहयोग मिल्नेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । सन्तान सुख हुनेछ ।
अनुहारमा कान्ति र मनमा शान्ति छाउला । कूटनीतिक नियोगको सहयोग मिल्नेछ । कार्यमा सफलता पाईनेछ । प्रेमसम्बन्ध कसिलो हुनेछ ।
प्रेममा मनमुटावका साथै मन कमजोर रहला । महत्वपूर्ण कार्यमा व्यवधान आइपर्ला । मनमा सङ्का उत्पन्न हुनेछ । सरकारी निकाएको भय रहला ।
सुदूरपश्चिममा आज १ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
नेकपाले बोलायो सचिवालय बैठक, के विषयमा हुनेछ छलफल?
रिपोर्ट नआउँदै क्वारेन्टाइनबाट छाडिएका ५ जनामा कोराना पोजिटिभ
ह्वात्तै बढ्यो सुनको मूल्य, चाँदीको लगानीमा बढी नाफा
भारतमा एकै दिन झण्डै १० हजार संक्रमित थपिए, मृतकको संख्या ७ हजार नाघ्यो
तालिबान समूहका ११ लडाकू मारिए
थप १० संक्रमितले जिते कोरोना
नालामा डुबेर १ युवकको मृत्यु
पाकिस्तानका पूर्व प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीमाथि बलात्कार र हिंसाको आरोप
भारतमा कोरोनाले बनायो नयाँ रेकर्ड
Suspect in Custody After Deputy Killed in Ben Lomond: Santa Cruz County Sheriff's Office
UPDATE: Multiple law enforcement agencies have confirmed that one Santa Clara County Sheriff's deputy has been killed and another injured. ViaaFacebook post, the Santa Cruz County Sheriff's Office said Saturday an active threat was in place in Ben ...
Solano County fire prompts mandatory evacuations
A wildfire burning just southwest of Winters in Solano County prompted mandatory evacuations on Saturday afternoon. The blaze, which burned 150 acres as of 5:15 p.m., was burning just off Quail Canyon Road and Pleasants Valley Road, according to Cal ...
Former Cub Sammy Sosa drops interesting line in 'Long Gone Summer' trailer
A week from Sunday, ESPN will bring baseball fans back to 1998 with the premiere (8 p.m. CT) of "Long Gone Summer,"adocumentary detailing Sammy Sosa and Mark McGwire's 1998 home run race.
Texas county GOP chair-elect won't assume office amid backlash for posting MLK quote withabanana
Washington, DC (CNN) A Texas Republican county chairman-elect said Saturday he won't assume office amid backlash over postingacontroversial image ofaMartin Luther King Jr. quote withabanana in the picture. Keith Nielsen, the GOP chairman-elect ...
US Marine Corps Issues Ban on Confederate Battle Flags
The U.S. Marine Corps on Friday issued detailed directives about removing and banning public displays of the Confederate battle flag at Marine installations — an order that extended to such items as mugs, posters and bumper stickers. “Current events area...